कापीमा लेखे सरह एन्ड्रोइडमा टाइप
रविन्द्र लम्साल शुक्रवार, कात्तिक ५, २०७३ 12763 पटक पढिएको
भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फनपार्कको कार्यालयमा आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा फेसबुक चलाउँदै थिएँ । साथीभाइले हालेका रमाइला पोस्टहरू, ट्रोलहरू हेरेर न्युजफिडमा हराउँदै थिएँ ।
त्यत्तिकैमा थाहा भयो कि एउटा नजिकको साथीको जन्मदिन रहेछ । छोटो मीठो केही कुरा लेखिदिनुपर्‍यो भनेर उसको फेसबुक प्रोफाइल खोलेँ अनि शुभकामना सन्देश लेख्दै गएँ । त्यत्तिकैमा एकजना व्यक्ति नजिक आएर मलाई सोधे ‘सुन्नुस् न, फनपार्कको मुख्य अफिस यही हो ? ' मैले पनि सानो स्वरमा ‘हजुर, हो' भनेँ ।
कार्यालयमा कामबस आएका ती व्यक्ति मेरै छेउ, सोफामा बसे । म पुनः मेरो फोन चलाउनतिर लागेँ । ‘जन्मदिनको साथीलाई धेरैधेरै शुभकामना । यो साल धेरै प्रगति उन्नति भएको देख्न पाइयोस् ।' यति लेखेर उसको फेसबुक टाइमलाइनमा पोस्ट गरिदिएँ ।
मैले फटाफट नेपालीमा टाइप गरेको, मेरै छेउमा बसेका ती व्यक्तिले नियाल्दै रहेछन् । उनले झट्टै सोधे ‘तपाईंले भर्खरै, मोबाइलको स्क्रिनमा, कापीमै लेखेजस्तो गरेर कसरी टाइप गर्नुभयो ? ' यस्तो प्रश्न अरू धेरैको मनमा पनि उब्जिन सक्छ ।
त्यसका लागि ‘गुगल प्ले स्टोर'मा गएर खोज्ने हो भने धेरै एप्लिकेसन्स भेटिन्छन् ।
तर, कापीमा कलमले लेखे जसरी नेपालीमा टाइप गर्न मिल्ने एप्लिकेसन निकै थोरै छन् । तीमध्ये धेरै प्रयोगकर्ता भएका र सबैभन्दा उपयोगी एप ‘गुगल ह्यान्डराइटिङ इन्पुट' नै हो । गुगलले डेभलप गरेको यस एपको प्रयोगले नेपाली साथै अन्य ९६ भाषामा छिटो र छरितो रूपमा टाइप गर्न सकिन्छ । यसले समयको बचत गर्नुका साथै, आफूले चाहेको शब्द सजिलै लेख्न सहयोग गर्छ ।
आफ्नो एन्ड्रोइड फोनदेखि गुगल प्ले स्टोरमा गएर, ‘गुगल ह्यान्डराइटिङ इन्पुट' खोजी फ्रिमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ । एप इन्स्टल भइसकेपछि ह्यान्डराइटिङ इन्पुटलाई इनेवल गरेर किबोर्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि, कन्फिगर ल्याङ्वेजमा गएर नेपाली भाषा छान्ने । लगभग ६ एमबी साइजको नेपाली ल्याङ्वेज प्याक डाउनलोड भएपछि, एन्ड्रोइड फोनमा सजिलै नेपाली भाषा टाइप गर्न सकिन्छ ।
यस एपले दुवै प्रिन्टेड र कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ सजिलै चिन्न सक्छ । सामान्य नेपाली टाइपिङ नआउनेलाई केही नेपाली शब्द टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ । तर ठ्याक्कै कापीमा लेखे जस्तो गरी प्रयोग गरिने हुनाले, यो एपमार्फत आफूले चाहेकै शब्द लेख्न सकिन्छ । इमोजीहरूको प्रयोग त झनै सजिलो छ । इमोजी छानी राख्नुभन्दा, सीधै इमोजीको चित्र कोर्दा पुग्छ ।
हालसम्म एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमका लागि मात्रै उपलब्ध ‘गुगल ह्यान्डराइटिङ इन्पुट' ५० लाखभन्दा धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिसकेका छन् । कम्तीमा एन्ड्रोइड भर्जन ४.०.३ को आवश्यकता पर्ने यो एप एन्ड्रोइड ‘एन' कम्प्याटिबल छ ।
भाइटीकाको उत्तम साइत ११:५१ बजे 372
सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको ज्‍यान गयो 540
भाईटीकामा पनि बाग्मती सफाइ 798